Citizenity of Antigua uye Barbuda Chirongwa cheMari
Kunze kwemari yesarudzo yakasarudzwa yekudyara, mari yekuwedzera inobhadharwa nemitezo yega yega yemhuri. Izvi zvinosanganisira zvinotevera:
Mari inobhadharwa inotaurwa mune tafura pazasi. 10% yemubhadharo wehurumende inobhadharwa (uye isingadzoserwe) painotumirwa chikumbiro chako nemari yacho zvichitevera kupihwa tsamba yekubvumirwa yakatumirwa kumumiriri anotenderwa akaendesa chikumbiro ichi. Mari yehurumende inobhadharwa kumunhu wese emhuri.
Yakafanira Kubatira Rei
Zvese zvinoshandiswa zvinoiswa mukuomarara nekuda kwekushingirira kuti vaone chete vanokodzera chikumbiro vanopihwa vagari veAntigua neBarbuda. Mari yakakodzera yekubhadhara inobhadharwa yemhuri yega yega pamusoro pemakore gumi nematanhatu sezvakarairwa mune tafura pazasi. Mari inobhadharwa inofanirwa kubhadharwa pakuendeswa kwechirongwa neakagadzwa mumiririri uye haidzorerwe.
Mumwe nemumwe wemhuri anofanirwa kubhadhara mari inotsanangurwa kuti iburitswe pasipoti yavo.
Iyo National Development Fund (NDF)
Kugadzirisa muripo $30,000 Madhora zviuru makumi matatu emhuri yemhuri inosvika mana Madhora zviuru makumi matatu emhuri yemhuri inosvika vanhu vana nemabhadharo ekuwedzera emadhora zviuru gumi nemashanu pamunhu wega wega anotsigirwa.
Nokuda Kwokushingaira $7,500 $ 7,500 + $ 7,500 kune mukadzi,
$ Zviuru zviviri kubva pane gumi nemaviri,
$ 4,000 pamudiki 18 uye kupfuura $ 7,500 + $ 7,500 kune mukadzi,
$ 4,000 pamudiki 18 uye kupfuura
* Dzimwe mari dzinobhadharwa dzinosanganisira mari yepasipoti. Iyi miripo inofanirwa kuchinja.
* Mari dzese dzataurwa dzirimo mumadhora ekuAmerica
Iyo Real Estate Investment Sarudzo
Sarudzo 1 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00
Sarudzo 2 - Mumwe Mushambadzi $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00
Sarudzo 3 - C0-kudyara * $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00
* Vaviri kana kupfuura vanyoreri vakaita chibvumirano chekutengesa uye chisungo chinosunga vanogona kukumbira pamwechete kuti vagari vagadziriswe nekudyara chero bedzi munhu mumwe nemumwe anogona kupa mari inoita US $ 400,000.
Iyo Bhizinesi Yekudyara Sarudzo
Imwe Investor $1,500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00
Joint Investment * $5,000,000.00 $5,000,000.00 $ $ 5,000,000.00
* Vashoma vevanhu vaviri vanoita mari yekudyidzana mubhizinesi rakabvumirwa rinosvika US $ 2. Munhu wega wega anodikanwa kuti ape mari inosvika US $ 5,000,000.00 pakuisa mari yacho pamwe.
Iyo Yunivhesiti yeWest Indies Fund (UWI)
Kugadzirisa muripo $ 15,000 yega yega yekuwedzera inotsamira.
Contribution $ 150,000 (inosanganisira michina yekugadzirisa) $150,000
Nokuda Kwokushingaira $ 7,500 + $ 7,500 kune mukadzi,
Nekuda kweDhivha uye mari yekupasita
Principal chikumbiro $7,500 $20,250
murume $7,500 $20,250
Dependent mwana ane makore 0-11 $0 $0
Dependent mwana ane makore 12-17 $2,000 $5,400
Dependent ane makore 18-25 $4,000 $10,800
Dependent mubereki ane makore makumi manomwe zvichikwira $4,000 $10,800
Pasipoti yekubhadhara - munhu mumwe nemumwe $300 $810
murume $75,000 $202,500
Dependent mwana ane makore 0-11 $10,000 $27,000
Dependent mwana ane makore 12-17 $20,000 $54,00
Dependent Mubereki ane makore makumi manonwe zvichidarika $75,000 $202,500
* Standard yakakodzera kushingairira uye mapepa epasipoti anoshanda
* Kusvika Gumiguru 31, 2020, US $ 10,000.00 yevana makore mashanu zvichidzika, US $ 5 yevana vane makore matanhatu kusvika matanhatu.
* Ndokumbira Cherechedza: ECD = Eastern Carribe Dollars uye USD = United States Dollars
Chikumbaridzo cheNational Development Fund (NDF) sarudzo chakaderedzwa%%; kubva kuUS $ 50 kuenda kuUS $ zviuru zana zvemhuri yemhuri inosvika vanhu vana, uye kubva kuUS $ 200,000 kusvika US $ 100,000 yemhuri yevashanu nevanopfuura.